जिन्दगी भनेकै फिलिम र फिलिम भनेकै जिन्दगी हो - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
चर्चित कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ पार्किन्सन रोगबाट पीडित छन् । दायाँ हात–खुट्टा काम्ने समस्या बढ्दै गएपछि उनले चार वर्षअघि शल्यक्रियामार्फत नेपालमै पेस मेकर राखेर उपचार गराएका थिए । त्यही रोग बायाँतर्फ पनि बढ्दै गएपछि अघिल्लो साता उनको पुन: शल्यक्रिया सम्पन्न गरियो । जटिल मानिने पार्किन्सन रोगको नेपालमै शल्यक्रिया गरेका श्रेष्ठ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भोलिपल्टै प्रमुख अतिथिका रूपमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भएका थिए । शल्यक्रियाबाट नियमित काममा फर्किएका श्रेष्ठसँग रोग, उपचार तथा जीवनका भोगाइहरूमा केन्द्रित रहेर साप्ताहिकका लागि जनक तिमिल्सिना र भिषा काफ्लेले गरेको कुराकानी
कति दिन अस्पताल बस्नुभयो ?
यस पटक एक हप्ता बसें । अघिल्लो पटक १० दिन बसेको थिएँ ।
पहिले र अहिले एउटै टिमले शल्यक्रिया गरेको हो ?
पहिलेको टिममा जापानी डाक्टर ताकोओमी ताइरो हुनुहुन्थ्यो । उहाँ डा. वसन्त पन्तको गुरु पनि हुनुहुँदो रहेछ । यसपटक डा. वसन्त पन्त, डा. रेश्मा श्रेष्ठसहितको टिमले शल्यक्रिया गरेको हो ।
तपाईंलाई यन्त्रमानव पनि भनिन्छ होइन ?
हो, नजिकबाट चिन्नेहरू मलाई यन्त्रमानव पनि भन्छन् । मेरो शरीरमा पेसमेकर छ, रिमोटले नै घटाउनु–बढाउनुपर्ने, रिमोटले नै चार्ज गर्नुपर्ने भएपछि मलाई यन्त्रमानव भन्नु स्वभाविक हो । म आफूले चाहेर यन्त्रमानव भएको होइन, रोग लागेर भएको हुँ ।
पार्किन्सन कस्तो खालको रोग रहेछ ?
पार्किन्सन एक किसिमले डरलाग्दो रोग पनि हो । होरिबल डिजिज अर्थात् यसमा हातखुट्टा स्लो हुँदै जाने, मुभमेन्ट स्लो हुँदै जाने, बोली नबुझिने, अलिअलि बिर्सन पनि खोज्ने, मुभमेन्ट डिसअर्डर भएर जाने, बोली, सानो हुने, आफ्नै शरीरमा नियन्त्रण नहुने, हातखुट्टा लुलो हुने हुन्छ । हातखुट्टा चल्दैन, दिमागबाहेक केही पनि चल्दैन । ब्रस गर्न थाल्यो, हात अडकिन्छ । नुहाउन थाल्यो, हात चल्दैन । यो प्राय: ६० वर्ष कटेका मानिसलाई लाग्न सक्ने रोग हो, तर ३५–४० वर्षका मानिसहरूमा पनि यो समस्या देखिएको छ । अमेरिकामा बर्सेनि ५० हजार पार्किन्सनका नयाँ बिरामी देखा परिरहेका छन् । नेपालमा पनि पार्किन्सनका रोगीहरू छन्, धेरैलाई यो रोग पार्किन्सन हो भन्ने समेत थाहा छैन् । कतिले त यसलाई बाथ पनि भन्दा रहेछन् ।
तपाईंले आफूलाई पार्किन्सन भएको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो ?
मेरो खुट्टा घिस्रिन थाल्यो । त्यसपछि मैले मोडल अस्पतालमा डा. सर्वोत्तम श्रेष्ठलाई जँचाए । उहाँले सारा चेकजाँच गरेपछि तपाईंलाई पार्किन्सनले छोएछ भन्नुभयो । उहाँले औषधी सुरु गर्नुभयो । अरू डाक्टरले कुनै औषधी दिए मसँग सोधेर मात्र खानुस है भन्नुभयो । मैले किन भनेर सोधे । उहाँले भन्नुभयो, जसलाई जचाएँ पनि औषधी त्यही हो, मैले दिएको औषधी कम हो, अरुले डोज बढाएर दिन सक्छन् । त्यसले केही समयका लागि तपार्इं फिट त हुनुहुन्छ, अर्को ठाउँमा जानुभयो भने नयाँ डाक्टरले डोज बढाउने मात्र हो । मैले लो डोजबाट सुरु गरेको छु । पार्किन्सनको डोज बढाउँदै जाँदा एक चरणमा पुगेपछि डोज बढाउने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन । तपाईंले दु:ख पाउनुहुन्छ । यो एकदमै असहज रोग हो । यद्यपि अहिले म प्रविधिलाई धेरै–धेरै धन्यवाद, वैज्ञानिकहरूलाई धन्यवाद भन्ने अवस्थामा छु । मेरो शरीरमा पेसमेकर राख्ने डाक्टरहरू पनि महान् छन् ।
डाक्टरले पार्किन्सन भएको जानकारी दिँदा तपाईंलाई यो रोग यस्तो हो भन्ने जानकारी थियो ?
मलाई राम्रोसँग थाहा थिएन । प्राय: रक्सी पिउनेहरूको हातखुट्टा कामेको देख्थें । लगलग हात काप्ने भएकाले यो रक्सी पिउनेहरूलाई लाग्ने रोग हो भन्ने लाग्थ्यो । पार्किन्सन भन्ने नाम पनि थाहा थिएन, म पार्टिन्सन भन्थें । पार्ट–पार्टमा टेन्सन दिने भएकाले यो रोगलाई पार्टिन्सन भनिएको होला भन्ने सोच्थें । नाम पनि पार्किन्सन रहेछ । अहिले पेसमेकर राखेको छु, यसले दस वर्षका लागि काम गर्छ । पहिले दायाँ च्यापेको थियो, अहिले बायाँ पनि च्याप्न थाल्यो । दिमागको दायाँ पार्टका लागि बायाँ पार्टमा पेसमेकर राखिन्छ भने बायाँ पार्टका लागि दायाँ पार्टमा राखिन्छ । बायाँ भागका लागि मस्तिष्कको दायाँ भागले काम गर्छ भने दायाँ भागका लागि बायाँ मस्तिष्कले काम गर्छ । केही अनलाइनले दायाँका लागि बायाँमा राख्यो भनेर गलत समाचार पनि लेखे । मेरो बायाँ पेसमेकर राखिएको थियो, पेसमेकर राखेपछि औषधी पनि खानुपर्छ । अब बायाँ पनि च्यापेको देखियो, बायाँ पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । मैले हालसालैको आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाएको थिए, उनले बायाँपट्टिका लागि तार राखिएको छ, औषधी खाँदा तार भएको ठाउँका लागि राम्रो काम गर्छ, तार नभएको ठाउँमा अलिअलि मात्र काम गर्छ, औषधीको डोज बढायो भने तार नभएको ठाउँमा समेत काम गर्छ, बायाँका लागि दायाँ पनि तार राख्नुपर्छ भनें । यसको पेसमेकर र ब्याट्री एउटै हुन्छ ।
डाक्टरले पार्किन्सन भएको कुरा बताएपछि तपाईंले के सोच्नुभयो ?
मैले सोचे यसको पनि कुनै न कुनै उपचार अवश्य होला । प्रविधिको यसरी विकास भैरहेको छ । म आफैं धेरै रोगको ब्रान्ड एम्बेसडर पनि छु । म पोलियो रोगको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड एम्बेसडर हुँ, त्यसमा धेरै अर्बपतिहरू ब्रान्ड एम्बेसडर छन् । अमेरिकामा यो रोगको ब्रान्ड एम्बेसडर बिल गेट्स हुन् । भारतमा अमिताभ बच्चन छन् भने चीनमा ज्याकी च्यान छन् । हामी खुसीका साथ यस्ता रोगको ब्रान्ड एम्बेसडरका रूपमा काम गरिरहेका छौं । अहिले म पार्किन्सनको ब्रान्ड एम्बेसडरजस्तै भैसकेको छु । यसलाई औषधीले निको पार्न सकिन्छ, हतोत्साहित हुनु पर्दैन । औषधीहरू छन्, यसका लागि वाकिङ गर्ने, फिजियोथेरापी गराउने, समय–समयमा जँचाउने, पार्किन्सन भएका मानिसहरूसँग सरसल्लाह गर्ने आदि काम नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । अरूसँग कुरा गर्दा कुरा बुझ्दैनन्, पार्किन्सन भएको मानिससँग कुरा गर्दा उसले फिल गर्छ । अरूसँग कुरा मिल्दै मिल्दैन, पार्किन्सन भएका मानिससँग मलाई यस्तो हुन्छ भन्दा उसले ठ्याक्कै कुरा बुझ्छ ।
त्यसबाहेक अरू के उपाय देख्नुहुन्छ ?
नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू छन् । त्यसमध्ये एउटा पेसमेकर पनि हो । यद्यपि विदेशमा पेसमेकर राख्न निकै महँगो छ, नेपालमै २०–२१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । भारतमा ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । त्यो धेरै गाह्रो कुरा हो, घरखेत नै यसको उपचारमा जान्छ । कतिको घर बेच्दा पनि पेसमेकर किन्ने पैसा पुग्दैन । पेसमेकरलाई चार्ज गरिरहनुपर्छ, यद्यपि त्यो धेरै गाह्रो पनि छैन, रिमोटले चार्ज गर्न सकिन्छ ।
शल्यक्रिया गरेर पेसमेकर राखिसकेपछि तुलनात्मक रूपमा के फरक पाउनुभयो ?
डिस्चार्ज भएकै दिन एउटा गीत रेकर्डिङ गरौजस्तो लागेको थियो । डाक्टरले पनि गरे हुन्छ भनेर रेकर्डिङ स्टुडियोका मान्छेलाई समेत बोलाएर म आउन सक्छु है भनेर सेडुअल पनि राख्न लगाए । फेरि भोलिपल्ट आवेशमा आएर नगरौं जस्तो लाग्यो अनि गइनँ । त्यसको दुई–तीन दिनमै पन्त प्रतिष्ठानको समारोहमा मुख्य अतिथिका रूपमा डा. पन्तले नै बोलाउनुभयो । अरुले बोलाएको भए त नगए पनि हुन्थ्यो, टाउकोमा प्वाल पार्ने मान्छेले नै बोलाएपछि नसक्ने भए त बोलाउँदैनथे भनेर पनि गएँ । भोलिपल्ट अर्को एउटा समारोहमा पुगेँ, त्यहाँ अलि थकान महसुस भयो । त्यसपछि अलिकति करेन्ट बढाए ।
राम्रो हैसियतको सेलिब्रेटीले यस्तो जटिल रोगको पनि नेपालमै उपचार गराउनुभयो त्यसको कारण के होला ?
जे भए पनि शरीरजस्तो कुरामा आँट गर्न गाह्रै पर्छ । यद्यपि मैले पहिलो पटक शल्यक्रिया गराउँदा जापानका डाक्टर आएको समय पारेर डा. पन्तले नै बोलाएपछि लौ गरौं भनेर गरे । त्यसअघि ती डाक्टरले विष्णुलालको शल्यक्रिया गरेको देखेको थिएँ । डाक्टरप्रति विश्वास लागेपछि गरिहाले । यसपटक डा. पन्तले नै गरे, उनी पनि पारंगत भैसके । त्यसभन्दा अघि त्रिपुरेश्वरको एक जमघटमा डा. पन्तले शल्यक्रिया गरेको तस्बिरहरू देखेको थिएँ । गिदीलाई प्वाङ–प्वाङ झिकिराखेका रै’छन् । त्यस्तो तस्बिर हेरिसकेकाले म त ढुक्कै थिए । गिदीको ढिक्का—ढिक्का झिकेर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने डाक्टर भनेर विश्वास थियो, पहिले पनि मेरो उपचार गरिसकेकाले मलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएन ।
भनेपछि नेपालमा पनि दक्ष जनशक्ति र उपचार पद्धति छ होइन ?
मेरो एकदमै जटिल शल्यक्रिया पनि यहीं सम्भव भयो । अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि धेरै अघि बढिसकेको छ । हामीकहाँ राम्रा–राम्रा डाक्टरहरू छन् । कतिपय राम्रा सिनियर डाक्टरको तुलनामा जुनियर डाक्टरहरू अझ ट्यालेन्टेड छन् । अपडेटेड डाक्टरहरू छन्, नयाँ–नयाँ मेसिन छन् । थुप्रै राम्रा अस्पताल पनि छन् । अन्नपूर्ण त्यस्तै राम्रो छ, मेडिसिटी देशले गर्व गर्न लायक अस्पताल बनेको छ ।
उपचारमा देश–विदेशभन्दा पनि विश्वास ठूलो कुरा हो ?
हो, विश्वास सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । विश्वास पनि गर्नुपर्छ, हेर्नु पनि पर्छ । सानो सानो रोगका लागि विदेश नै धाइरहनु पर्दैन । विदेशमा डाक्टरहरूले फेरि–फेरि त्यहीँ पुगिरहनुपर्ने वातावरण बनाइरहेका हुन्छन् । मन कमजोर हुन्छ, फेरि आउ भनेपछि नगै पनि भएन । मलाई त यहीं ठीक छ, फेरि आऊँ भने पनि नजिकै छ, जान–आउन गाह्रो छैन ।
घरपरिवार र आफन्तले यहाँ रिस्क नलिऊँ , बाहिरको राम्रो अस्पतालमा जाऊँ भनेनन् ?
बहिर जाने त मैले कुरा नै गरेको थिइनँ । शल्यक्रिया गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र थियो । छोरा यमनले पार्किन्सन भएका बिरामीहरूलाई भेटायो, उनीहरूका गतिविधि देखायो । मेरी छोरीले पनि अमेरिकाबाट डिप ब्रेन स्टुमुलेसन (डिबीएस) शल्यक्रिया राम्रोसँग हुन्छ गर्नुहोस भनिन् । अरू एक दुई जनाले पनि शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिए, अनि मैले पनि आँट गरे, राम्रै भयो । नत्र म त काम नै गर्न नसक्ने भैसकेको थिएँ । शल्यक्रिया गर्दा एमआरआई गर्नुपर्छ, मेरो पेसमेकर थियो, शरीरमा म्याग्नेटिक हुँदा एमआरआई गर्नु हुँदैन । त्यतिबेला चार घण्टाजति पेसमेकर बन्द गर्दा मेरो हात त लुलो भएर झुन्डियो । मेरो शरीर मेसिनले मात्र चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । मेसिनले मलाई सजिलो बनाइरहेको रहेछ । पेसमेकर राखिएका हजारौं बिरामी छन्, नेपालमै पनि । यो प्रविधि निकै महँगो पनि छ, अहिले केही सस्ता चिनियाँ पेसमेकर पनि आएका छन् ।
अहिले नियमित काममा फर्किसक्नुभयो ?
सुटिङमा फर्किएको छैन । कार्यक्रमहरूमा भने जान थालेको छु । मंसिरदेखि नयाँ चलचित्र ‘दालभात’को सुटिङमा सक्रिय हुन्छु । शल्यक्रिया नभएका बेला दालभात खान पनि गाह्रो थियो मलाई । हात एकदमै सुस्त हुने, मुखमा लग्दा पोखिने, खाना मुखमा नपर्ने, उठ्न, बस्नदेखि हिँडडुल गर्नसम्म समस्या थियो, अहिले खाना पनि मुखमा पर्छ, हिँडडुल गर्न, उठ्न–बस्न पनि सहज छ ।
शल्यक्रियापछि दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?
नियमित काममा गैरहेको छु । कार्यक्रमहरूमा बोलाउँछन्, त्यहाँ पुगिरहेको छु । स्मार्ट छु । सबैभन्दा खुसीको कुरा शल्यक्रियाअघि मेरो बोली बुझिँदैनथ्यो, अहिले स्पष्ट छ । कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूले राम्रै बोलिरहेको छु जस्तो लाग्ने तर अरूले सुन्दै नसुन्ने अवस्था थियो । अहिले त्यस्तो छैन । दोस्रो शल्यक्रियापछि एकदमै सजिलो अनुभव गरिरहेको छु । त्यसअघि उठ्न पनि समस्या थियो, अहिले त सजिलै उठ्न सक्छु ।
रोग लागिसकेपछि आत्मविश्वास कत्तिको जरुरी हुँदो रहेछ ?
आत्मविश्वास निकै ठूलो कुरा हो, आत्मबल नै ठूलो कुरा रहेछ । मलाई त अहिले म आत्मबलले नै बाँचिरहेको छु जस्तो लाग्छ ।
समाजमा र परिवारको भूमिका कस्तो हुन्छ यस्तो बेला ?
परिवारको भूमिका ठूलो हुन्छ । सबै कुरा परिवारले नै नजिकबाट भोगिरहेको हुन्छ, परिवारले नै केयर गरिरहेको हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ । मेरा छोराबुहारीहरू छन्, उनीहरू हरेक कुरामा केयर गर्छन् । चिया पनि मेरो थेरापीको ख्याल गरेर अलि टाढा राखिदिन्छन् । यतिसम्मको केयर गर्छन् उनीहरू ।
अहिले धेरै के कुरा सम्झनुहुन्छ ?
पुराना भिडियोहरू हेर्छु, मलाई त्यतिबेलाको काम खुब मिस हुन्छ । त्यस्तो रहेछु, अहिले यस्तो भएँ भन्ने सोच्छु । म एकदमै क्रियाशील थिए, अनुहारमा चमक थियो । उफ्रिने, नाच्ने, हाँस्ने, गाउने अवस्था अनुसारको मुभमेन्ट गर्न सक्ने अनि स्पष्ट बोल्ने भिडियोमा आफूलाई देख्छु । अस्ति त मेरो अनुहार डाउन थियो, पार्किन्सले अनुहारको भावभंगिमा खाइदिन्छ, सामान्य मानिसको भावभंगिमा चुप लागेर बस्दा शून्य हुन्छ, पार्किन्सन भएको मानिसको माइनस हुन्छ । शल्यक्रिया अघि सन्चो छैन कि क्या हो भनेर दिनको ५० जना सोधिरहेका हुन्थे, शल्यक्रिया गरेर फर्किएपछि एक जनाले मात्र सोधेका छन् ।
महको ‘म’ पनि लेख्नुभयो ?
हो, मैले पार्किन्सनकै दौरान महको ‘म’ लेखेको हुँ । त्यतिबेला मेरी श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार समेत चलिरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा लेखेकाले त्यसमा केही सिरियस कुरा पनि परेका छन् ।
महको मबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
धेरै राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । केही समयअघि अमेरिकामा त्यहीं पुस्तकका बारेमा कार्यक्रम भएको थियो । हालसालै रातो बंगलामा अर्को भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यो अलि फरक खालको कार्यक्रम थियो । त्यहाँ छुट्टै माहोल बनेको थियो । ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको फन्ड जम्मा भयो । कन्सट पनि होइन, नाटक पनि होइन, गजल–गायन पनि होइन । ६ हजार रुपैयाँको टिकट काटेर कोही अन्तर्वार्ता हेर्न आउला भन्ने पनि लागेको थिएन । किनभने मैले टीभीमा सयौं अन्तर्वार्ता दिएको छु तर त्यहाँको त माहोल नै फरक थियो । अन्तर्वार्ता सँगै बीचबीचमा मैले लेखेका गीतहरू पनि प्रस्तुत गरियो । त्यो कार्यक्रमको शैली नै फरक थियो । त्यसपछि अमेरिकामा भएको कार्यक्रम भव्य नै भयो । पोखरामा पनि एकदम राम्रो भयो अब दमौलीमा यस्तै कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौं । हामी यस्तै कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै गर्ने सोचमा छौं । महको म यो वर्ष सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ ।
वास्तबिक जीवन र रिल (पर्दामा देखाइने) जीवनको कहीँ मिलन पनि हुँदो रहेछ ?
वास्तविक जिन्दगीकै एउटा निचोड हो फिलिम पनि । वास्तबिक जिन्दगीमा धेरै भोगाइहरू हुन्छन् त्यही विशेष लागेका चिजहरू समेटेर फिलिम बनाइन्छ । रियल लाइफकै पाटाहरू समेट्ने हो त्यसमा । एक किसिमले भन्दा जिन्दगी भनेकै फिलिम र फिलिम भनेकै जिन्दगी हो ।
पार्किन्सन रोगका विषयमा चलचित्र बनाउने सोच छ कि छैन ?
अहिले तत्काल नै चलचित्र बनाउने सोच त छैन, तर पनि कुनै समय यसलाई रिलमा त ल्याउनै पर्छ । किनभने नेपालमा पनि प्रविधि भित्रिएको छ । सेवा सुविधा बढ्दै गएको छ । यही रोगका कारण संगीतकार नातिकाजी बित्नुभयो, गीतकार राममानजस्ता हस्तीहरू यही कारणले बित्नुभयो । कतिपयमा त यही रोगका कारण अल्जाइमर (बिर्सने, नचिन्ने) समेत हुन्छ ।
धेरै सुख–दु:खसँग जुध्नुभयो ? आफ्नै जीवनलाई सम्झदा कसरी सम्झनुहुन्छ ?
जिन्दगीको एउटा डिजाइन हुन्छ । सुख सम्झियो सुख हुन्छ, दु:ख सम्झियो दु:ख हुन्छ । यो दु:ख र सुखको संगम हो ।
त्यो डिजाइन कसरी हुँदोरहेछ ?
अलिकति वातावरणका कारणले, अलिकति घरपरिवार, अलिकति समाज, अनि आफ्नै जीवनशैली अन्य कतिपय क्रियाकलाप मिलेर हुँदोरहेछ ।
तपाईं रमाइलो मान्छे तर गीत लेखनमा बढी सेन्टिमेन्टल देखिनुहुन्छ, किन होला ?
म पनि कहिलेकाहीँ त्यही सोच्छु । मेरा सबै नेवारी गीत चाहिँ रोमान्टिक नै छन् तर नेपालीचाहिँ रोमान्टिक लेख्छु भनेर सुरु गर्‍यो लेख्दा–लेख्दै सेन्टिमेन्टल भैहाल्छ । म प्राय: नारायणगोपालका गीत सुन्ने भएकाले त्यसको प्रभाव पनि हुन सक्छ ।
आफ्ना अभिनय वा रचनाहरूमा आफ्नो जिन्दगीको भोगाइ कहीँ पाउनुभएको छ ?
पछिल्लो पटक अमेरिकाबाट फर्किएर लेखेको गीत मैले आफ्नै भोगाइमा आधारित भएर लेखेको हुँ । राति धेरै प्रयास गर्दा पनि निन्द्रा लागेन, निद्रा नलाग्ने छाँटकाँट देखेपछि उठेर बत्ती बाली कापी–कलम तयार गरें अनि लेख्न थाले :
रात है भरि तिमीसँग मैले कुरा गरेको गर्‍यै थिएँ
सँगसँगै हिँडौं भन्दै थियौ तिमी, किनभने म अलि परै थिएँ ।
ब्युँझेर हेर्दा पो चाल पाइयो, त्यो मीठो सपना रहेछ ।
भित्तामा हेर्दा तिमी मज्जाले हाँसिरहेकी देखेँ
जता जान्थें उतै–उतै मलाई हेरिरहेकी देखें
दोहोर्‍याई हेर्दा पो चाल पाइयो तस्बिर रहेछ त्यो तिम्रो
नजिकै बसी तिमी मसँग बोलिरहेझैं लाग्छ
बितेका दिनका सम्झनामै भुलिरहेझंै लाग्छ ।
यो मैले आफ्नो जिन्दगीको पछिल्लो भोगाइलाई समेटेर लेखेको गीत हो । जिन्दगी यस्तै रहेछ । अनुभव गर्नुपर्ने रहेछ, भोगाइको अनुभव लिनुपर्ने रहेछ, संघर्ष गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसबीच आइपर्ने सबै कुरालाई स्वीकार पनि गर्नुपर्ने रहेछ । सबै किसिमको काम गर्नुपर्ने रहेछ, त्यस क्रममा कहिले आफ्ना लागि, कहिले परिवारका लागि, कहिले समाजका लागि, कहिले देशका लागि काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।